လူအနည်းငယ်ကျနော်တို့မကြာခဏနေ့စဉ်ဘဝ၌ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်သော်လည်းဒီဝါးမြိုခြင်းကိုငါသိ၏။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ဘုံရည်မှန်းချက်ရှိခြင်းတဦးတည်းဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သိပ္ပံ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စိတ်ပညာ၏အရေးပါသောဒေသများအမျိုးမျိုးအတွက်ကျင့်သုံးနေပါတယ်။
ဒီနရောမှာဝါးမြိုခြင်း၏အယူအဆအဓိပ္ပာယ်များစွာရှိပါတယ်။ အဆိုပါဒေသတစ်ခုချင်းစီအတွက်, ဒါပေါ်မှာဆေးဝါး, ဇီဝဗေဒ, ဘာသာရေး, စိတ်ပညာနှင့်ဖြစ်စေ, နောက်ဆုံးအဆင့်ကပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရန်အတွက်အချင်းချင်းအုပ်စုတစ်စု၏ Fusion ကိုဖော်ပြသည်။ လူတွေမှာတော့ဝါးမြိုခြင်း - အခြားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများကိုတာဝန်ပေးဖို့အားဖြင့်အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၏ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့အတော်ကြာလူမျိုး၏ပြီးပြည့်စုံသောပျောက်ဆုံးမှုနှင့်၎င်းတို့၏အစဉ်အလာ၏စုစုပေါင်းဖျက်သိမ်းရေးမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဒါဟာအများအပြားအမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်:
ကထိရောက်သောရလဒ်များကိုသေချာအဖြစ်လူမှုအပြောင်းအလဲများအတွက်အစဉ်အမြဲဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတင်ပြ။ မေးခွန်းပေါ်ပေါက် - ထိုဝါးမြိုခြင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကလူမှုဗေဒအတွက်သိမ်းသွင်းရန်ကိုဆိုလိုပါသည်ဖြစ်ပါသည်ဘာလဲ? ဒါဟာတခြားလူဆီကနေလာသော, အခြားရက်နေ့တွင်, လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ features တွေအစားထိုး၏ရိုးရှင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကပျက်ကွက်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ် ၏စိတ်ထဲတွင် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု, ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ဘာသာစကားမှယခင်ကဘာသာရပ်ခဲ့ကြသည်သူတွေကို။
တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုအကူးအပြောင်းများနှင့်လျင်မြန်စွာလူကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုလမ်းများ၏ဆန္ဒအလျောက်သဘောသဘာဝ။ ကံမကောင်းစွာပဲအသက်တာ၌, ဘက်တော်သားအများအပြားဖြစ်ပွားမှုရှိပါတယ်။ မကြာခဏပြုလုပ်ရှိရာတိုက်ပွဲများကိုလယ်ထဲမှာစောငျ့ရှောကျဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာအတင်းအဓမ္မပြန်လည်နေရာချထားရေး၏အမှုများကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အစိုးရကိုအဘယ်အရာကိုယုံကြည်ဖို့နှင့်မည်သို့ပြုမူဖို့လူတို့အဘို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ကခြင်းမရှိဘဲ, လူတွေပဲလိုက်ဖက်စွာတီထွင်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်ဝါးမြိုခြင်း၏အကြောင်းတရားများ၏မြင်ကွင်းကိုတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ point ကနေအလိုအလျောက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဤဝေါဟာရကိုအသစ်တစ်ခုအတွေ့အကြုံများကိုကိုယ်စားပြုသောလိုက်လျောညီထွေလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ရဝါးမြိုဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာ၏သိမှတ်ခံစားမှု အထံတော်သို့အချက်အလက်များ၏ပမာဏအဘို့မလိုအပ်စရာရှိသောကြောင့်, ။ နို့စို့အရွယ် မှစ. သင်ယူခြင်းဤအချိန်လေးမှတ်ဉာဏ်အတွက်စုဆောင်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းကြောင့်တိုးမြှင့်ရှိရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
စံရဝါးမြိုခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဘာသာစကားဖြစ်ရပ်ဆန်းအတွက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာခွဲခြားထားတယ်။ များစွာသောစကားတလမ်းတည်းဖြင့်ရေးထားလျက်ရှိ၏, သူတို့၏အသံထွက်ကိုကွဲပြားခြားနားသောတဦးတည်းမြည်နေကြသည် - နှစ်ခုအက္ခရာများ။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များအဆက်မပြတ်ပိုပိုပြီး Non-စံမြန်နှုန်းနေ့စဉ်အသက်တာ၌ကြုံတွေ့, ငါတို့ပြောပြီဘာသာစကားပုံစံများနေကြသည်။ အလားတူအသံ၏ convergence assimilyatstsii linvisticheskoy အောက်ပါဆိုင်းဘုတ်များထင်ရှား:
အဆက်အသွယ် - နှစ်ခုကပ်လျက်အသံပေါင်းစည်း;
တိုးတက်ရေးပါတီ - ယခင်သံကိုအောက်ပါအကျိုးသက်ရောက်;
အပြည့်အဝ - ကွဲပြားခြားနားသောအသံများကိုတူညီနေကြသည်;
distaktnaya - ထိုကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနောက်နေ့အသံမှမရပ်တည်လျက်ရှိ၏
လမ်းနည်းပါး - ယခင်ဖို့နောက်ဆက်တွဲအသံကအကျိုးသက်ရောက်မှု;
အပြည့်အဝမရ - အသံကွဲပြားရှိနေဆဲပေမယ့်အချို့မြေပေါ်တွင်အချင်းချင်းဆုံ။
ကွဲပြားခြားနားသော dissimilation ၏ဝါးမြိုခြင်း?
ကမ်ဘာပျေါတှငျလူတိုင်းနီးပါးဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ပြိုကျ - ဝါးမြိုခြင်း dissimilation ၏ကွာခြားချက်များကိုပထမဦးဆုံးအမှု၌အစဉ်မပြတ်ဒုတိယအတွက်ပိုမိုနီးကပ်စွာကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များမကြာခဏမျှမျှတတမရဖြစ်ကြပြီးဒါမတယောမညီမမျှအမြဲရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကပထမဦးဆုံးဂျပိုပြီးစွမ်းအင်သိုလှောင်နှင့်ဒုတိယသုံးစွဲခြင်းနှင့်မဆိုအောင်မြင်မှုများပြဿနာများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ အထူးသဖြင့်ကအသက်အရွယ်နှင့်အတူကြွလာ။ ထုတ်လုပ်စွမ်းအင်င်း၏စွန့်ပစ်ကိုကျော်နိုင်ရှိရာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတဆင့်ကလေးများအတွက်ဝါးမြိုခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်။
စိတ်ဖောက်ပြန် - လက္ခဏာများ
အမြိုးသမီးမြားအဘို့အနှစ် 30 များ၏အကျပ်အတည်း
လျှပ်စစ် grindstone ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Cineraria - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
Hydrangeas paniculata "ငွေဒေါ်လာ"
ကျွန်မအိမ်သူအိမ်သား Ficus ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် - နိမိတ်လက္ခဏာများ
ငှက်ပျောချောင်းဆိုး - အရသာများနှင့်ထိရောက်သောချက်ပြုတ်နည်းများ
ခရိုမီယမ် picolinate Slim